Appy Pie App Builder: Umsebenzisi-Friendly, Akukho-Khowudi yoSetyenziso seQonga | Martech Zone
Appy Pie App Builder: Umsebenzisi-ubuhlobo, Akukho-Khowudi yoSetyenziso seQonga
NgoLwesihlanu, Matshi 27, 2020 NgoLwesihlanu, Matshi 27, 2020 UJayraj Shetty
Uphuhliso lwesicelo lishishini eliqhubekayo eliguqukayo. Ngakumbi nangakumbi amashishini afuna ubukho be-intanethi, imibutho yophuhliso lwe-app banomsebenzi abawusebenzele. Kukho ukonyuka okuqhubekayo kwimfuno yeeapps ezenze ukuba intengiso ibongamele abaphuhlisi abakhoyo. Ukongeza, lishishini elinengxaki yokunyuka kweendleko kunye nokunyuka kweemfuno. Ngaphandle koko, iiapps ezikhoyo zifuna ukugcinwa rhoqo. Uphando lubonisa oko Ngama-65% ezibonelelo zichithwa ukuzama ukugcina iiapps ezikhoyo kumashishini.
Imibutho inokuthi isinde koku kude kube ngoku, kodwa iindleko ezonyukayo kunye notyalo mali ezifunekayo ukugcina kunye nokwenza izinto ezintsha ngeapps zazo zibonisa umfanekiso ombi ngekamva lale shishini. Kungokwemvelo ukuba uninzi lwemibutho ibalekele kuphuhliso lwe-AGILE ngamanqanaba ahlukeneyo empumelelo. Nangona kunjalo, kukho itekhnoloji entsha enika imibutho ithuba lokuqhubela phambili kwintengiso, ukumilisela i-AGILE, ukunciphisa iindleko kunye nokunyusa amanani. Ayisiyo-khowudi insiza yophuhliso.
Akukho khowudi ikamva lophuhliso losetyenziso. Ngelixa ukufaka iikhowudi kungumzi mveliso oya kuhlala ujikeleze, akukho khowudi yenzelwe imibutho ukuba icwangcise inkqubo yophuhliso losetyenziso. Ngokwe- uphando lwangoku nje, I-40% yemibutho khange bamkele khowudi okanye baceba ukuyamkela kunyaka ozayo.
Appy Pie App Builder Solution Isisombululo
Appy Pie ibonelela ngesisombululo sokwakha iapps kwimibutho nakubantu. Umakhi wayo wosetyenziso yenye yezona software zintle zokwenza usetyenziso kwintengiso namhlanje. Eyaziwayo ngendalo esebenziseka lula, umakhi weapp angakunceda wenze iiapps kwimizuzu nje embalwa. Iappie pie ikuvumela ukuba uphuhlise ii -apps ze-Android, i-iPhone kunye ne-PWA kubathengi bakho. Ngaphezulu kweempawu ezingama-200 ezifihlakeleyo, ukwenziwa kweapps akukaze kube lula okanye kukhawuleze.
Appy Pie App Umakhi ungaphezulu kancinci kweminyaka emi-5 ubudala. Kule minyaka mi-5 bavumele abantu kunye namashishini ukuba enze izigidi zeapps. Ixhaswe ngabaphuhlisi abaziingcali, isoftware ine-interface engenamakhowudi ngokupheleleyo ecutha ixesha lokuphuhlisa. Ukongeza, iyanciphisa inkqubo yokugcina kunye nokuhlaziya iapps ngokucofa nje okumbalwa. Nge-Appy Pie, ungenza uluhlu olubanzi lweeapps ezinje ngeeapps zemidiya yoluntu, iiapps zeshishini, iiapps zenkxaso yabathengi, iiapps zeAR / VR, iiarhente zokuthengiswa kwezindlu kunye nokunye.
Unxibelelwano olulula nolunomdla lweAppie Pie, ukwenziwa kweapps kunokulungiswa kwaye kwenziwe lula ngokubonakalayo.
Yintoni ebeka iAppy Pie App Builder yahluke:
Ukucoca uyilo lwedashboard olulungiselelwe ukuhamba ngokulula.
Ngaphezulu kwe-200 yeempawu ezinje ngezaziso zokutyhala, amandla eVR, imithombo yeendaba edibeneyo kunye neencoko
Izandla zokupapasha inkxaso kwiivenkile zeapp. Isiseko esifanelekileyo sokuxhasa abathengi sithetha ukuba i-Appy Pie ihlala ikho ukukunceda.
I-Appy Pie isesoftware yayo, isenza iimveliso ezintsha, ezingcono yonke imihla. Baqala ngokulula ukusebenzisa umakhi wekhowudi kwaye basebenzise ifilosofi efanayo ukwenza abakhi bewebhusayithi abangakhowudi, ii-chatbots kunye nesoftware yoyilo. I-Appy Pie okwangoku ayinazicwangciso zokuphazamisa ishishini le-IT kunye ne-no-code app builder kwaye ijolise ekudibaniseni iinkqubo zelifa ukuqinisekisa ukuba ishishini lophuhliso lweapps lukhula ngokudibeneyo.
Inyaniso akukho khowudi inokuba ikude kakhulu, kodwa iAppy Pie iyile isoftware enokuthi ikhathalele konke ukuphakamisa okunzima okubandakanyekayo kuphuhliso lweapp, inceda imibutho kuyo yonke indawo icime ubuya umva kwaye yenze iiapps ezifanelekileyo ezinomzamo omncinci. I-ace yokwenyani kwimikhono yoMakhi woSetyenziso kukuba inyenyisa ulondolozo olufunekayo losetyenziso. Ngomakhi weapps, uhlaziyo lufuna nje ukucofa okulula okuvumela imibutho ukuba ijolise kwimizamo yabo yokwenza izinto ezintsha kunye nokugcina izixhobo ezibalulekileyo zokuhlangabezana neemfuno ezikhulayo zeshishini.
Ukwenza iapp ngeAppy Pie
Ukwenza iiapps ngeAppy Pie kulula kunokuba ucinga. Yinkqubo elula ye-3.
Register Bhalisa nge-Appy Pie. Kwideshibhodi yakho, phantsi kwethebhu yoyilo, khetha itemplate yoyilo lweapp yakho. Iappie pie ibonelela ngekhulu leetemplate onokukhetha kuzo. Hlela itemplate yakho kwaye ukhethe imibala, iifonti kunye nolwakhiwo. Ngenisa uphawu lwebrand yakho.
Yenza Inyathelo elilandelayo libandakanya ukongeza amanqaku kwi-app yakho. Kwiimpawu zethebhu, unokukhangela amanqaku emva koko ucofe inqaku ukuze ulongeze kwi-app yakho. Unokwenza into nganye ukuba ihambelane nenjongo yakho ngendlela ebalaseleyo. Izigidi zeentlobo zeeapps zingenziwa ngokwezifiso ezikhoyo kwideshibhodi yomakhi weapp.
uvavanyo -Ukuba uhleli kuyilo kunye neempawu zakho, vavanya nje usetyenziso lwakho kwisixhobo nasemva kokuba wanelisekile, papasha kwiVenkile yeVenkile okanye kwiVenkile yokudlala, okanye zombini.
Yiyo yonke into ekufuneka uyenzile ukwenza iapps ngeAppy Pie. Uphuhliso lwe-App luyaqhubeka. Akukho khowudi linqanaba elilandelayo elingenakuphepheka lolu luvela. I-Appy Pie ibonelela ngamathuba kuwo onke amashishini ukuba afike phambi kwekhava. Ukwanda kokwamkelwa kwekhowudi kunye nokukhula ngokukhawuleza kweqonga kubeka ikamva eliqaqambileyo lomntu wonke.
Joyina i-no-code revolution namhlanje! Kubo bonke abantu abasebenza ekhaya, hlalani nikhuselekile!
Bhalisela i-Appy Pie
tags: Iapie pieusetyenziso lweshishiniiinkonzo zenkxaso yabathengiakukho khowudiakukho khowudi insiza yokwakhaiinkonzo zosasazo zasekuhlaleni
UJayraj ngumbhali womxholo osinjongo sakhe ebomini kukuba yipolyathmath. Akabikho okwangoku kodwa ukufuna kwakhe kumnike ulwazi olubanzi malunga nezinto ezininzi. Uzama ukwabelana ngolwazi lwakhe ngokubhala. Ngexesha lakhe lokuphumla, ukhangela i-Intanethi, athathe uhambo olude, kwaye azame ukudlala ngothando. Uthanda uthando njengoTerry uthanda uthando!
Iingcebiso zeVidiyo yokuThengisa kwiOfisi yaseKhaya